သက်သာလောနိတ် သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်။ – Second Letter to the Thessalonians – JESUS UNLTD
သက်သာလောနိတ် သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်။ – Second Letter to the Thessalonians
Turn Off Myanmar >>>
၁ ပေါလု၊ သိလနဲ့ တိမောသေတို့က အဖဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သက်သာလောနိတ်အသင်းတော်ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၂ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆီက ငြိမ်သက်ခြင်းကို လက်ခံရရှိကြပါစေ။
၃ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းက ပိုပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာသလို ခင်ဗျားတို့တစ်ဦးချင်းစီဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပိုပြီးတော့ ခိုင်မာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ဖို့ အကြောင်းတရားတွေ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိပါတယ်။
၄ တခြားအသင်းတော်တွေမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြောင်းကို ပြောရတာ ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ နှိက်စက်ညှင်းပန်းခြင်းတွေနဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကို အခုချိန်မှာ ကျော်ဖြတ်နေရပေမဲ့ ဒီစမ်းသပ်မှုတွေကြားမှာ ခင်ဗျားတို့တွေဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းကို လေ့ကျင့်ကြပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို ပြသနေပါတယ်။
၅ အခု လူတွေက ခရစ်တော်အတွက်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို နှိက်စက်ညှင်းပန်းကြပေမဲ့ ဘုရားသခင်က လူတွေအားလုံးကို တရားမျှတစွာနဲ့ တရားစီရင်မဲ့နေ့ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေက အချည်းအနှီး ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ဆုချပြီးတော့ သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကို ဝင်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆ ဘုရားသခင်က တရားမျှတပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာ ဘုရားသခင်ဆီကနေ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တာကို လက်ခံရလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်က အခု ခင်ဗျားတို့ကို နှိက်စက်ညှင်းပန်းနေတဲ့သူတွေကို အပြစ်ပေးလိမ့်မယ်။
၇ ပြီးတော့ နှိက်စက်ညှင်းပန်းခြင်းတွေကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေကို ဘုရားသခင်က စမ်းသပ်မှုတွေအားလုံးကနေ ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်းကို ပေးလိမ့်မယ်။ သခင်ယေရှု ကောင်းကင်ဘုံကနေ သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ ဆင်းကြွလာတဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့အပေါ် ဒါတွေ ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။
၈ ဘုရားသခင်အကြောင်း အမှန်တရားကို နားလည်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့သူတွေကို ဘုရားသခင်က မီးလျှံထဲမှာ အပြစ်ဒဏ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို လက်မခံချင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို အပြစ်ပေးလိမ့်မယ်။
၉ ဒီလိုမျိုးလူတွေဟာ အပြစ်ပေးခြင်းခံရပြီးတော့ ထာဝရပျက်စီးခြင်းဆီ သွားရလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းကျက်သရေ၊ အစွမ်းတန်ခိုးနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကို ဘယ်တော့မှ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၀ သခင်ယေရှု ကမ္ဘာကြီးကို ဆင်းကြွလာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့သန့်ရှင်းသူတွေက ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီနေ့မှာ ယုံကြည်သူတွေအားလုံးက သခင်ယေရှုနဲ့ ဆုံတွေ့ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ဆီ ကျွန်တော်တို့ ဟောပြောခဲ့တဲ့ အမှန်တရားကို ခင်ဗျားတို့တွေက ယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ခင်ဗျားတို့လည်း ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေထဲမှာ ပါဝင်ရလိမ့်မယ်။
၁၁ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းအတိုင်း ခင်ဗျားတို့တွေ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကို ကူညီပေးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ကောင်းမြတ်တာတွေလုပ်ဆောင်လိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးပါစေ။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ရဲ့အစွမ်းတန်ခိုးပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းလျှောက်ပါတယ်။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းက ကောင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ခင်ဗျားတို့ကို တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်။
၁၂ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်ကို ဘုန်းကြီးစေလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းကျက်သရေထဲကို ဝင်ကြရဖို့၊ ကောင်းမြတ်တာကိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ခင်ဗျားတို့ကို ကူညီပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ 1 Paul, Silas and Timothy are greeting the church in Thessalonica which belongs to our God the Father and the Lord Jesus Christ.
2 Receive grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ.
3 Brothers, your faith keeps growing more and more. And each of you treats one another with love which is getting stronger and stronger. So we have every reason to always thank God for you.
4 We are happy to tell about you in other churches of God. Now you are going through persecutions and hardships. But during these trials, you exercise patience and show your faith.
5 Now people are persecuting you for Christ. But the day will come when God judges all people with justice. So you are not suffering in vain. And God will reward you with entering His Kingdom.
6 God is just. That is why each person will receive from God what he deserves. God will punish those who are persecuting you now.
7 And God will give peace and deliver from all trials those of you who are going through persecutions. It will happen to all of us on the day when the Lord Jesus comes down from heaven along with His mighty angels.
8 In flaming fire God will punish those who refused to understand the truth about who God is. He will punish those who did not want to accept the Good News about our Lord Jesus.
9 Such people will receive punishment and go to eternal destruction. They will never see the face of the Lord, His glory and power.
10 When the Lord comes to the earth, His holy people will glorify Him. On that day, all believers will be excited about the Lord. And you also will be among God’s people because you believed in the truth which we preached to you.
11 We always pray for you that our God would help you live according to His calling. May the Lord fill you with the desire to do good. We ask God to give you His power. And then your faith will prompt you for actions.
12 With your good works you will glorify the name of our Lord Jesus Christ. And you will enter into God’s glory. Our God and the Lord Jesus Christ gave you His grace which would help you do good.
၂း၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင် ယေရှုခရစ်တော် ဒီကမ္ဘာကြီးကို ဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ဆုံတွေ့ရဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို စုစည်းပါလိမ့်မယ်။
၂ နုံနုံအအနဲ့ မနေကြဖို့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ခရစ်တော်ဝိဉာဉ်နဲ့ ဆင်းကြွလာတာကို သူတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောလာရင် မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့။ ခရစ်တော်က ဆင်းကြွလာပြီးပြီလို့ တစ်ယောက်ယောက်က ဟောပြောလာရင် မယုံကြည်ကြပါနဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီအကြောင်းကို စာထဲမှာရေးထားတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေကိုလည်း မယုံကြပါနဲ့။ ဒီလိုမျိုးစားတွေကို ကျွန်တော်တို့ မပို့ခဲ့ပါဘူး။
၃ ဘယ်သူကမှ ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တော့မှ မလှည့်ဖြားစေပါနဲ့။ လူတွေက ဘုရားသခင်ကို အရင်ဆုံး ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ကြလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အပြစ်ရဲ့လူသား ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိထားကြပါ။ သူက မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့ ပျက်စီးခြင်းထဲကို ရောက်ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါတွေပြီးမှပဲ ခရစ်တော် ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်လာမဲ့ရက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။
၄ ပျက်စီးခြင်းရဲ့သားဟာ လူတွေက ဘုရားသခင် ဒါမှမဟုတ် ဘုရားလို့ ခေါ်ဝေါ်ကိုးကွယ်တဲ့အရာမှန်သမျှရဲ့ ရန်သူဖြစ်လိမ့််မယ်။ လူတွေ ကိုးကွယ်တဲ့အရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာ သူ့ကိုယ်သူ ထားလိမ့်မယ်။ သူက ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ထဲမှာ ဘုရားလိုထိုင်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသခင်လို့ ကြေငြာလိမ့်မယ်။
၅ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတိုနဲ့အတူရှိတုန်းက ဒီအကြာင်းကို ပြောခဲ့တာ သတိမရကြဘူးလား။
၆ အပြစ်ရဲ့သားကို တားဆီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတဲ့အတွက် သူက ဒီလောကထဲမှာ မပေါ်လာနိုင်သေးတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောကထဲကို အပြစ်ရဲ့သား ရောက်လာမဲ့အချိန်တစ်ခု ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
၇ မတရားမှုတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်အစွမ်းတန်ခိုးတွေက ပျက်စီးခြင်းရဲ့သား ရောက်လာဖို့အတွက် ဒီလောကကို ပြင်ဆင်ဖို့ အလုပ်တွေလုပ်နေပါပြီ။ ဒီလောကထဲကို အပြစ်ရဲ့သား ရောက်လာဖို့ တားဆီးနေတဲ့အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီတားဆီးနေတဲ့အရာကို ဒီလောကထဲကနေ မယူသွားမချင်း အပြစ်ရဲ့သားက ရောက်လို့မရပါဘူး။
၈ ဒီအတားအဆီးကို ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီဆိုးယုတ်တဲ့လူသားက ဘုရားသခင်ရဲ့ ဗိမာန်တော်ထဲမှာ ထိုင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားအဖြစ် ကြေငြာလိမ့်မယ်။ ဒါပြီးတဲ့နောက် သခင်ယေရှုက ကမ္ဘာကြီးကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့ ဆိုးယုတ်တဲ့ ဒီလူသားအပေါ်မှာ သူ့ရဲ့လေကို မှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ အသေသတ်လိမ့်မယ်။ သခင်ယေရှုက သူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းအားဖြင့် ဆိုးယုတ်တဲ့လူသားကို ဖျက်ဆီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉ ဒီလောကကြီးထဲကို ဒီဆိုးယုတ်တဲ့လူသား ရောက်လာတဲ့အခါ စာတန်က သူ့ရဲ့အစွမ်းတန်ခိုးအားလုံးကို ပေးပြီးတော့ အဲ့ဒီလူကတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုးယုတ်တဲ့လူဟာ မှားယွင်းတဲ့ သဘာဝလွန်လက္ခဏာတွေနဲ့ အတုအယောင်အံ့သြစရာနိမိတ်လက္ခဏာတွေကို ပြသလိမ့်မယ်။
၁၀ ဆိုးယုတ်တဲ့လူသားက ပျက်စီးခြင်းထဲ သွားနေတဲ့သူတွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားဖို့ ဆိုးယုတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေအများကြီးကို လုပ်လိမ့်မယ်။ ပျက်စီးခြင်းထဲ သွားနေတဲ့သူတွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ သမ္မာတရားကို မယုံကြည်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁၁ ဒီအချက်ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို လွဲမှားခြင်းတန်ခိုးထဲကို လုံးဝအပ်နှံလိုက်လို့ သူတို့တွေဟာ အလိမ်ညာတွေကို ယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။
၁၂ ဘုရားသခင်က သမ္မာတရားကို မယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ ဆိုးယုတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်ဖို့ နှစ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကို အပြစ်ပေးစီရင်လိမ့်မယ်။
၁၃ ညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်ဘုရားက ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်တယ်။ ဘုရားသခင်က အစကတည်းက ခင်ဗျားတို့ကို ကယ်တင်ခံရဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့လို့ ဘုရားသခင်ကို အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို သန့်ရှင်းစေခဲ့ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့တွေက သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၄ ခင်ဗျားတို့ဆီ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ဟောပြောတုန်းက ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ခေါ်ခဲ့လို့ ခင်ဗျားတို့တွေ ကယ်တင်ခြင်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ဘုန်းကျက်သရေထဲကို ဝင်နိုင်ကြပါပြီ။
၁၅ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ဆီ ဟောပြောတုန်းက ကြားခဲ့တဲ့ သွန်သင်ချက်ကို သေသေချာချာလိုက်လျှောက်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ဆီကို ရေးခဲ့တဲ့ အယူဝါဒတွေကို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါ။
၁၆ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကျွန်တော်တို့ဆီ ပြသခဲ့ပြီးတော့ ထာဝရတည်တံ့နေမဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကို အံ့သြစရာမျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင် ယေရှုခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို ခိုင်ခံ့စေပါစေ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးကို သူ့ရဲ့အစွမ်းတန်ခိုးနဲ့ ဖြည့်ပေးပါစေ။ ခင်ဗျားတို့လုပ်ဆောင်တဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးထဲမှာလည်း ခရစ်တော်ရဲ့ အစွမ်းတန်ခိုး ထင်ရှားပါစေ။ 1 Brothers, when our Lord Jesus Christ comes to the earth, He will gather all of us to meet Him.
2 We beg you not to be naive. Do not be afraid if someone tells you that he saw the coming of Christ in the spirit. Do not believe if someone preaches that Christ has already come. And do not trust those who say that we wrote about it inaletter. We have not sent such letters.
3 Never let anyone deceive you in any way. You should know that in the beginning people will rebel against faith in God. And then the man of sin will appear. He will be the son of the devil and will be doomed to destruction. And only after that the day will come when Christ returns to the earth.
4 The son of destruction will be the enemy of everything what people call God or deity. He will put himself above anything that people worship. He will sit in God’s temple as God and declare himself to be God.
5 Don’t you remember that when I was with you, I told you about it?
6 You know that now there is something that hinders the son of sin, so he cannot appear in this world. But the time will come and then the son of sin will come into this world.
7 The secret powers of lawlessness are already at work to prepare the world for the coming of the son of destruction. But this plan cannot be fulfilled until something that is hindering the son of sin to come into this world, would be taken from this world.
8 When this hinderance is removed, this wicked man will sit in God’s temple and declare himself to be God. After that the Lord Jesus will come to the earth. He will blow on him and kill this wicked man with His breath. The Lord will destroy him with His glorious presence.
9 When this wicked man comes into this world, Satan will give him all his power and will act through him. This wicked man will show false supernatural manifestations and fake miracles.
10 He will do many evil deeds to deceive those who are going to destruction. These are the people who rejected God’s love and did not believe in the truth which could save them.
11 For this reason, God will give them over to the power of complete delusion, and they will believe lies.
12 God will condemn all people who did not believe in the truth and who loved to do evil deeds.
13 Brothers, the Lord loves you. And we should always thank God for you, because from the very beginning He chose you to be saved. You believed in the truth and God made you holy with His Spirit.
14 When we told you the Good News about Christ, God called you to Himself, and you received salvation. Now you can enter into the glory of our Lord Jesus Christ.
15 Brothers, follow precisely the teaching which you heard while we were preaching to you. And keep firmly the doctrines which we wrote you about.
16 Our God the Father showed us His love and gave us peace which will last forever. And by His grace He filled our hearts with wonderful hope.
17 May our Lord Jesus Christ make you strong. May He fill all your words with His power. And may the power of Christ be revealed in all your good deeds.
၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့တွေ သခင်ဘုရားရဲ့စကားကို မြန်မြန်ပြန့်နှံ့စေနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါ။ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့သလို တခြားလူတွေလည်း ဘုရားစကားရဲ့အာဏာစက်ကို လက်ခံကြဖို့ ဆုတောင်းကြပါ။
၂ ယုံကြည်သူအမည်ခံကြပေမဲ့ အပြစ်တွေထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးတော့ ဆိုးယုတ်တဲ့သူတွေလို ပြုမူနေတဲ့သူတွေဆီကနေ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်လွှတ်ပေးဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါ။
၃ သခင်ဘုရားက သူ့ရဲ့ကတိတော်တွေအပေါ် သစ္စာရှိတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ကြံ့ခိုင်စေပြီးတော့ မကောင်းဆိုးဝါးဆီကနေ ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။
၄ ခင်ဗျားတို့တွေဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ချပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော်တို့ သွန်သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ရှေ့အနာဂါတ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေကို လိုက်လျှောက်ကြမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ သေချာပါတယ်။
၅ သခင်ဘုရားက သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဖြည့်ပေးပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ခရစ်တော်ရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းမျိုး ပေးသနားပါစေ။
၆ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့အထဲမှာ အပျင်းထူပြီးတော့ အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ ယုံကြည်သူတစ်ချို့ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီက ကြားနာခဲ့တဲ့ သွန်သင်ချက်ကို မလိုက်နာကြဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်တာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်။
၇ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့နဲ့နေခဲ့တုန်းက အပျင်းမထူဘဲနဲ့ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံအတိုင်း လိုက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။
၈ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဖက်အနေနဲ့၊ နေ့နဲ့ည ကျွန်တော်တို့တွေ အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငွေကြေးကိစ္စပြဿနာတွေအတွက်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ဝန်မပိစေခဲ့ပါဘူး။
၉ အမှန်က၊ ကျွန်တော်တို့မှာ ခင်ဗျားတို့ဆီက ငွေကြေးအထောက်အပံ့ကို လက်ခံရရှိဖို့ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရှိပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့တွေ လိုက်လျှောက်ဖို့ ပုံသက်သေကို ပြသချင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့နဲ့နေခဲ့တုန်းက “အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့သူက မစားရဘူး” လို့ ကျွန်တော်တို့ ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့အထဲမှာ အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကြားရပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘာမှမလုပ်ကြသလို တခြားလူတွေရဲ့အသက်တာထဲကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီးတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကြတယ်။
၁၂ ဒီလိုမျိုးလူတွေကို အစီအစဉ်တကျနဲ့နေထိုင်ကြဖို့၊ အလုပ်ရှာကြဖို့နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြဖို့ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။
၁၃ ညီအစ်ကိုတို့၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြပါ။
၁၄ ကျွန်တော်တို့ ဒီစာထဲမှာ ရေးထားတာတွေကို မနာခံချင်တဲ့သူတွေကို သေသေချာချာ အာရုံစိုက်ကြပါ။ ဒီလိုမျိုးလူ အရှက်ရအောင် ဘာမှလုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
၁၅ သူတို့တွေကို ရန်သူလို မဆက်ဆံသင့်ပေမဲ့ သူ့အပြုအမူတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်လို ပြောပြပါ။
၁၆ ဘုရားသခင်က ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အချိန်နာရီတိုင်း၊ အခြေအနေတွေတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ဖြည့်စွမ်းပေးပါစေ။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့အတူပါရှိပါစေ။
၁၇ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် စာတွေအားလုံးရဲ့ စာရေးသူဖြစ်တာကို သိစေချင်လို့ ကျွန်တော် ပေါလုက ဒီစကားလုံးတွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီလိုမျိုး ပုံစံနဲ့ စာရေးပါတယ်။
၁၈ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်က ခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့အတူ ရှိပါစေ။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 Brothers, pray for us that we could quickly spread the word of the Lord. Pray that other people would accept the authority of the Word of God the way you did.
2 Pray that God would deliver us from those who pretend to be believers, but in reality they live in sins and act like wicked people.
3 Remember that the Lord is faithful to His promises. He will make you strong and protect you from the devil.
4 We are confident that you belong to the Lord. And we know that you live according to what we taught you. We are sure that you will follow our teachings in the future.
5 May the Lord fill your hearts with His love and give you the same kind of patience which Christ has.
6 Brothers, there are some believers among you who are lazy and do not want to work. They do not follow the teaching which they heard from us. So in the name of our Lord Jesus Christ we ask you to avoid fellowship with such brothers.
7 When we lived among you, we were not lazy, but earned our own living. And you know that you must follow our example.
8 We did not live at your expense. On the opposite, we worked hard day and night. And we did not burden any of you with our financial problems.
9 Of course, we had every right to receive financial support from you. But we wanted to show you an example to follow.
10 So when we were among you, we preached, “If someone does not want to work, he must not eat.”
11 But we can hear that there are those among you who do not want to work. They do nothing and annoy others by interfering in other people’s lives.
12 In the name of our Lord Jesus Christ we would like to speak to such brothers. We encourage them to put their lives in order, getajob and start earning their living.
13 But you, brothers, continue to do good deeds. And don’t get tired and frustrated.
14 Pay close attention to those who do not want to obey what we have written in this letter. Have nothing to do with suchaperson to make him feel ashamed.
15 Though you should not treat him like an enemy. But speak about the consequences of his actions as you would speak to your brother.
16 The Lord is the source of peace. And at any time and in any situation may He fill you with His peace. May the Lord be with you all.
17 I, Paul, am greeting you and writing these words with my own hand. I am doing it so that you could know that I am the author of all my letters. And I write this way: